Solvency के हो र यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने? | अर्थव्यवस्था वित्त
क्लौडी क्यासलहरू | | सामान्य अर्थव्यवस्था, कम्पनीहरु
सल्भन्सी एकाइको वित्तीय कथनहरूको भित्र सूचकको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यो कम्पनी, कानूनी व्यक्ति वा प्राकृतिक व्यक्तिबाट हुनसक्दछ। यो आर्थिक क्षमता परिभाषित गर्न को लागी प्रयास गर्दछ कि एक को आर्थिक दायित्वहरु को सामना गर्नु पर्छ। तपाईंसँग कुन क्षमता छ भनेर जान्नको लागि, तपाईं एक सम्बन्ध खोज्नुहुन्छ जुन निर्धारण गर्दछ कि तपाईंको देनदाराहरूको सम्बन्धमा कति सम्पत्ति छ। यस सम्बन्धमा सम्पत्तिसँग सम्बन्धित स्वामित्व भएका कुल सम्पत्तिहरू विभाजन गर्दछ।
वित्तीय स्वायत्तता वा तरलता भएको अनुपातको साथ भ्रमित हुनु हुँदैन। समाधान भविष्य सामना गर्न क्षमताको पछि लाग्छ भुक्तानी जबकि वित्तीय स्वायत्तता अनुपात एक कम्पनी वा व्यक्ति ofण लिन को लागी योग्यता। अर्कोतर्फ, तरलता त्यस्तो अनुपात होइन जुन कहिँबाट आएको हो, तर लोकप्रिय रूपमा, पैसा भएको हुँदा विलायक भएकोमा अलमल्लमा पर्छ। यसैले, solvency राम्रो वा एक कम्पनी को आर्थिक वा वित्तीय विश्लेषण गर्न सूचक हो। यसलाई अधिक नजिकबाट बुझ्नको लागि, यो लेख घुलमिलको वरिपरि घुम्नेछ र यसको गणना कसरी गर्ने र कसरी हामी यो सूचकको व्याख्या गर्न सक्छौं भनेर वर्णन गर्दछ।
1 कसरी समाधान गणना गरिन्छ
2 एक लगानी को लागी उधारोलाई कसरी व्याख्या गर्ने
2.1 कुन स्तरहरू उपयुक्त छन्
2.2 कसरी खातामा कम्पनीको solvency स्तरको इतिहास लिन्छ
कसरी समाधान गणना गरिन्छ
कम्पनीको सोल्वन्सी स्तर निर्धारण गर्नका लागि बनाउनु पर्ने गणना एकदम सरल छ। एकातिर, तपाईंले सबै सम्पत्तिहरू जोड्नु पर्छ, र सबै दायित्वहरूको योगफलले त्यस मानलाई विभाजन गर्नुहोस्। यसलाई एक उदाहरणको साथ राम्रोसँग हेरौं:
सम्पत्ति: कुल 350.000 XNUMX०,००० युरो।
दायित्व: कुल २००,००० युरो।
सम्पत्ति / दायित्व: 1.75 को solvency स्तर।
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, यो सूचक प्राप्त गर्न केहि सरल छ, तर कुन सतर्कता पर्याप्त छ भनेर निर्धारण गर्न महत्त्वपूर्ण छ। चाहे यो तपाइँको व्यक्तिगत वित्तीय को लागी हो, यदि तपाइँ एक कम्पनी को मालिक हो, वा तपाइँ तपाइँको भरोसा राख्न मा रुचि एक लगानीकर्ता हो र तपाइँ विश्लेषण को लागी एक भरपर्दो र उद्देश्य चर हुन चाहानुहुन्छ।
एक लगानी को लागी उधारोलाई कसरी व्याख्या गर्ने
हामी उच्च प्रतिस्पर्धी संसारमा बाँचिरहेका छौं जहाँ कोही पनि पछाडि नछाड्न चाहन्छ। त्यहाँ कम्पनीहरू छन् कि पर्याप्त नाफा उत्पादन गर्न आउँदछ ताकि orrowण लिनु पर्ने छैन वा यति न्यूनतम गर्न हुँदैन। जहाँसम्म, प्राय जसो कम्पनीहरूको केसले नयाँ लगानी गर्न धक्का दिन्छ, प्रायः नयाँ loansणको लागि अनुरोध गर्दै, र यो यहाँ छ जहाँ सोल्भन्सी अनुपातले कुन स्तरमा orrowण लिन सक्छ भन्ने संकेत गर्न सक्छ। डाटाको रूपमा, यो जानकारी सधैं वित्तीय स्वायत्तता अनुपातको साथ हुन सक्छ जुन हामीले पहिले छलफल गरेका थियौं।
कुन स्तरहरू उपयुक्त छन्
१.1.75 than भन्दा कम अनुपातको साथ एक कम्पनी जुन हामीले अघिल्लो उदाहरणमा दियौं, उदाहरणका लागि १.२ भएकोले यसको अर्थ सोल्भन्सी लेभल कम छ भन्ने हुन्छ। अर्को शब्दमा, नयाँ क्रेडिट प्राप्त गर्न, वा नयाँ पूर्वाधारहरू सिर्जना गर्न, अधिक तलब, इत्यादि तिनीहरूको क्षमता अधिक सीमित हुनेछ। हामी परिभाषित गर्न सक्छौं र यसलाई व्यापक रूपमा स्वीकार्य छ solvency को एक पर्याप्त स्तर 1.5 बाट हुनेछ। १. 1.5 भन्दा कम केहि पनि एक कमजोर क्रेडिट हुनेछ, र यो कम हुनेछ।
यद्यपि सबै उद्योगहरू एकै दिशामा चल्दैनन्, र त्यहाँ केहि debtणको स्तर कम र अरु उच्च (जस्तो कि निर्माणको विश्व जस्तो, उदाहरणका लागि) प्रवृत्ति हुन्छ।
कसरी खातामा कम्पनीको solvency स्तरको इतिहास लिन्छ
विगतका अनुपातहरूको साथमा एक घुलनशील अनुपात लगानीको लागि मार्गनिर्देशनको रूपमा काम गर्न सक्दछ। यो पर्याप्त छ मौलिक विश्लेषण मा प्रयोग, र निर्धारण र समयको साथ सहिष्णुताको एक स्तरलाई विभिन्न तरिकामा व्याख्या गर्न सकिन्छ।
यो घटनामा कम्पनीले निरन्तर प्रगति गरिरहेको छ, त्यो हो, यसको नेट इक्विटी समयको साथ स्थिर रूपमा बढ्दछ र यसको सोल्भेन्सी लेभल पनि कायम गर्दछ राम्रो संकेत हो। यो हुन सक्छ, अन्य कारकहरू बीच, कि व्यवस्थापन टोलीले एक राम्रो रणनीति परिभाषित गरेको छ र आफ्नो वित्तीय वक्तव्यमा सन्तुलन कायम गर्दछ जुन वर्षौंको अवधिमा धेरै स्थिर हुन्छ।
यदि, अर्कोतर्फ, तपाईंको विलम्बतालाई कायम राखिएको छ, तथापि, तपाईंको नेट वर्थ कम हुन्छ, यो सम्भव छ कि तपाईंको शेयर पनि कम हुनेछ। यदि होईन, र तपाइँको सेयर होल्ड भयो भने, लगानीकर्ताले या त मूल्य घाटा याद गरेनन वा अन्य रणनीतिक योजनाहरू छन्। यस पोइन्टको आफैंमा अनुसन्धान हुनुपर्दछ, प्रत्येक कम्पनी एक विश्व (जस्तो म सामान्यतया भन्छु)।
अर्कोतर्फ, यो त्यो भनेको बिना नै जान्छ एक कम्पनी मा solvency स्तर को एक लगातार घाटा एक राम्रो संकेत छैन, विशेष गरी यदि यो निरन्तर रहेको छ, वा त्यो लगातार वृद्धि भनेको राम्रो कुरा हो। तपाईंले यो निश्चित गर्नुपर्दछ कि कम्पनीले यी सम्पत्तिहरू प्रयोग गर्दछ, त्यो हो, यो बढ्दो जारी राख्न चाहन्छ। आदर्श परिदृश्य (वा ती मध्ये कम्तिमा एउटा) बढ्दो सोल्भन्सी लेभलको कम्पनी अवलोकन गर्नु हुनेछ, जुन अन्तत: विस्तार गर्दा घट्न सक्दछ, र त्यसपछि विवेकी तहहरू पुन: प्राप्ति गर्न जारी रहन्छ, र यस्तै।
यो दलदल मैदान हो जहाँ कोही पनि जान चाहँदैन, यसलाई दिवालियापन वा दिवालियापन पनि भनिन्छ। इन्सोलभेन्सी सोल्भन्सीको बिपरित हो, रकमको भुक्तानी पूरा गर्न असमर्थता हो। अवस्थित दुई प्रकारका दिवाली, नगद / नगद प्रवाह र ब्यालेन्स पाना।
नगद प्रवाह इन्सोलभेन्सी वा नगद भनेको जब एक कम्पनी वा व्यक्ति भविष्यमा भुक्तान सामना गर्न तरलता छैन, तर यदि तपाईंसँग पर्याप्त सम्पत्ति छ भने। यो स्थिति सामान्य रूपमा लेनदारसँग भुक्तानी विधिहरू मार्फत छलफल गरिन्छ। सामान्यतया torणीसँग मूल्यवान चीजहरू हुन्छन्, जस्तै सम्पत्ति, मेशिन, एक कार, आदि।, र लेनदारले भुक्तानी प्राप्त गर्न पर्खन सक्छ। यस ढिलाइलाई प्राय जसो कुनै न कुनै रूपमा सजाय दिइन्छ, त्यसैले यसले fineणको अन्तिम भुक्तानीको साथसाथै जरिमान लिन सक्छ।
ब्यालेन्स पाना इन्सोलभेन्सी सबै हुन्छ जब एक कम्पनी को सम्पत्ति पनि अपर्याप्त छ ofण को अन्तिम भुक्तानी सामना गर्न। सामान्यतया, अर्को भुक्तानी हुनु अघि यस स्थितिलाई चिन्तन गरिन्छ, जसमा यो चिन्ता भैसकेको छ कि अर्को भुक्तानी भुक्तान गर्ने वा कुनै प्रकारको गतिविधि कायम राख्न कुनै तरिका हुँदैन। यो अवस्था आउनु अघि सामान्यतया गतिविधि कायम राख्ने निर्णय गरिन्छ (यसको फाइदाको लागि)। अन्तमा, credणदाता र andणी दुबैले यो अवस्थाको लागि वार्तालाप गर्न सक्छन् र एक सानो घाटा स्वीकार गर्न सक्छन्, वा नयाँ debtण वा भुक्तानीको प्रकारले कुराकानी गर्न सक्दछ जुन तिनीहरूलाई गतिविधि कायम राख्न मद्दत गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » negocios » कम्पनीहरु » समाधान